Kyaw Nyo Thway: စတန့်ထွင်တာလား???
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ် ရှစ်တန်းလောက်တုန်းက ကျောင်းပိတ်ခါနီးရင် စာအုပ်လေးတွေကိုယ်စီဝယ်၊ ပြီးရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အော်တိုရေးခိုင်းကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပေါ့။ သူကရေးလိုက် ကိုယ်ကရေးလိုက်နဲ့ဟုတ်နေတာပဲ " သူငယ်ချင်းလေး၊ မင်းဘေးမှာငါ၊ ထာဝရပေါ့။" ဆိုတာမျိုးလည်းပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်" ချစ်တရ်ဆိုတာတစ်ခဏ၊ သံယောဇဉ်သာပဓာန" စသည်ဖြင့်ပေါ့မျိုးစုံလို့။
ကျွန်တော်ကတော့ စာအုပ်ဝယ်ပြီးတစ်ခါမှ သူများမရေးခိုင်းဖူးဘူး။ ၀ါသနာမပါလို့၊ ပြီးတော့လိုက်ပြီးရေးခိုင်းရမှာလည်းပျင်းတယ်၊ နောက်တစ်ခုက သူများတွေလာရေးခိုင်းတာကိုပဲ ဒိုင်ခံရေးချင်တာလေ။ (စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံကုန်မှာကြောက်လို့လည်းပါမှာပေါ့)။ အဲ့ဒိလိုရေးကြတဲ့အခါ အကြော င်းအရာပေါင်းစုံရေးတဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ချို့က ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေရေကြတယ်။ထွင်ကြတာလား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး။ဥပမာ ။ ။ အပေါ်ကရေးပြထားသလို "ချစ်တယ်" လို့ရေးရမယ့်နေရာတွေမှာ"ချစ်တရ်"ဆိုတာမျိုးတွေ ရေးလေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခါမှမရေးဖူးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုးရေးရတာကို လှတယ်လို့မထင်ဘူး။ သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ လှတယ်လို့ထင်ချင်ထင်နေမှာပေါ့လေ။ အဲ့ဒိတုန်းကတော့ ကလေးပဲရှိသေးတာဆိုတော့ ဘာမှမသိဘူး။ မကြိုက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုတာပဲရှိတာ။
နည်းနည်းအသက်လေးကြီးပြီးအထက်တန်းအောင် အရွယ်လည်းရောက်လာရော မြန်မာစာမြန်မာစကားကို ချစ်တတ်လာတယ်။ မြန်မာစာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ဂရုစိုက်ဖို့သိလာတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့၊ ကိုယ့်ဆရာ၊ ဆရာမတွေကြောင့်ပဲလို့ ယုံကြည်မိတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆိုရင်လည်း မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ ကို ဂရုစိုက်ကြတဲ့သူတွေ ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတောင် တစ်ခါတစ်လေမှာ အဲ့ဒိလို အသံထွက်ကို အမှားလုပ်ရေးတဲ့သူတွေရှိရင် ပြောပြလိုက်တယ်။ ။ "ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စပြီးမှားနေရင်၊မှားအောင်လုပ်နေရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ အမှန်ရောက်အောင် လမ်းပြပေးနိုင်မှာမဟုတ်"လို့လေ။ သူတို့ကလည်းကိုယ်မှားနေရင် ပြန်ပြီးပြောကြတာပေါ့။အထက်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အထိ တစ်ချို့တွေမှာ အဲ့ဒိအကျင့်ကို မပြင်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြတာ တွေ့ဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်က စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကိုမမှန်ခဲ့တော့ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ဖူးတယ်။
တစ်ကယ်ဆို ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ အထက်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အဖေခေတ်တုန်းကဆို ရိုးရိုးပေးစာလောက်ကို english စာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရေးတတ်နေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်လည်းကျရော မြန်မာစာကိုတောင် စာလုံးပေါင်းမှန်မှန်နဲ့ မရေးနိုင်ရုံမျှမကတော့ဘူး စာကြောင်းတောင် ပုဒ်အနေအထားမှန်အောင် မရိုက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဟုတ်သေးဘူးပဲထားဦး။ သူများအမြင်မှာ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကိုတောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မရေးနိုင်တာ ရှိရင် ရှက်ဖွယ်ပါပဲ။ မြန်မာစာသည်တို့စာလို့ မအော်ဘူးပဲထားပါ။ ကိုယ်နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့ မြန်မာစာကိုတော့ လေးလေးစားစားနဲ့ ရေးသင့်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းမှားတာရယ်၊ မလေးမစားရေးတာရယ်ဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းမှားတာက သတိမထားမိလို့၊ လောသွားလို့ ဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်ချင်စရာကောင်းပေမယ့်။ (အမှန်တော့ ဒါလည်း အားနည်းချက်ပါပဲ) လေးလေးစားစားမရေးပဲ။ "တယ်" တွေသုံးတိုင်း "တရ်" လို့ရေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဘလောဂ့်တွေပေါ်မှာ စာရေးတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေက English meaning အမှားတွေတွေ့တဲ့အခါ၊ အမှန်ကို ပြင်ပေးသွားကြပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုပဲလေ မြန်မာစာရေးပြီဆိုရင်လည်း မြန်မာစာကို လေးလေးစားစားအသုံပြုသင့်ပါတယ်။ အချင်းချင်းလည်း ပြောပြပေးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရောက်၊ ဘယ်ဘာသာစကားတွေနဲ့ပဲ အလုပ်တွေလုပ်နေနေ။ မြန်မာတစ်ယောက်အဖို့ မိခင်ဘာသာစကားကိုတတ်မြောက်ပြီးမှသာ တစ်ခြားဘာသာစကားကို သင်ယူလို့ဖြစ်တာပါ။ အဲ့ဒိတော့ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိတဲ့ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို လေးစားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီး မြန်မာဘာသာစကားကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေသူတွေကတော့ ပိုလို့တောင် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို ဂရုပြုသင့်ပြီး၊ အချင်းချင်းကိုလည်း ပြုပြင်ပေးသင့်ပါတယ်။ စတန့်ထွင်တယ်ဆိုတာ နေရာမှန်မှကြည့်ကောင်းပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင်တော့ မျက်စိစပါးမွှေးစူးစေပါတယ်။ သိက္ခာလည်းကျစေပါတယ်။
(ဒီစာပိုဒ်ထဲမှာ စာလုံးပေါင်းအမှားပါရင်ပြင်ပေးခဲ့နော်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်မှာ :) )
Kyaw Nyo Thway: စတန့်ထွင်တာလား??? - စတန့်ထွင်တာလား???
Sunday, February 1, 2009 at 5:42 AM
SDL at February 7, 2009 at 12:01 AM
ဘေးကပုံထဲက စာကို 1 မိနစ်လောက်ဖတ်လိုက်ရတယ်..။
လင်းလက်ကြယ်စင် at February 18, 2009 at 2:13 PM
မြန်မာစာ မြန်မာစကား စာအုပ်လေး ထပ်မံဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ သိပြီးသားဆိုရင် မလိုတော့ဘူးပေါ့ ကိုဂစ်တာရေ :)
vanko at April 20, 2009 at 9:40 AM
ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အခု ဘလော့တွေမှာ..။ နောက် အထူးသဖြင့်က social network တွေမှာ နောက်ပိုင်း လူငယ်တော်တော်များများဟာ မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်အောင် မရေးနိုင်ကြတာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်အောင် မရေးတက်တာ ရှက်စရာလို့ မသိကြဘူး။
ကိုဂစ်တာပြောသလိုပဲ တစ်ချို့က မသိလို့မှားတာ။ တစ်ချို့က မလေးစားတာ။ မလေးစားတာကိုတော့ ခွင့်လွတ်စရာ မရှိပေဘူး။ မသိတာဆိုတာကလည်း ကိုယ်မှားလို့ မှားနေမှန်းတောင် မသိကြတာဗျ။ အတော်ခက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း '၏သည်' မရွေးမှန်တယ်လို့တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အကျအပေါက်တော့ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အတက်နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ချရေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မြင်နေကျသတ်ပုံမဟုတ်ဖူးဆိုရင် ကိုယ်ရေးတာ မှားနေပြီလို့ သိပါတယ်။ ဒါက စာဖတ်နာတာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာတွေ မြန်မာစာများများဖတ်ကြပြီး မြန်မာစာကို လေးစားလာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက ဒုက္ခ၊ အခုတော့ ဟာသ